မတျ 17, 2019 – Healthy Life Journal
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဖြူစင်တဲ့ အပြုံးက လူတစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ ကော်ဖီအသောက်များတာနဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်းထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုမကောင်းတာ စတဲ့အချက်တွေက သွားကြေးတင်စေပြီး သွားကျောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွားနဲ့ခံတွင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကင်းစင်စေမယ့်သဘာဝနည်းလမ်းတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဆော်ဒါမှုန့်...
အစိမ်းရောင်ဝမ်း ဘာကြောင့် သွားရသလဲ . . .
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (တာဝန်ခံဆရာဝန်၊ ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း) မေး. ၀မ်းသွားတဲ့အခါ ၀မ်းက ဘာကြောင့် အစိမ်းရောင် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ၀မ်းက ပုံမှန်အားဖြင့် အညိုရောင်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဝမ်းအရောင်က ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဥပမာ အ၀ါတွေပဲ တောက်လျှောက်သွားနေတာ၊ အနီတွေ...